Lungela ukuya on an adventure ne Igugu 7×7. Lona omunye the best Ibhonasi Slots Online kokuba an amazing pirate indaba ephathwayo. It is owakhe lolwandle nge ulwandle ecacile blue and white sandy beach. Lokhu lwakhiwe futhi lakhiwa IWG ngubani odumile ngokudala ezinye zezindawo ezingcono kakhulu Ibhonasi Slots Online embonini. You can even win up to £200,000 bonus prize by the end of your round. It wethulwa 2016 futhi iye yazuza elikhulu umdlali base selokhu. It has konke kusuka Okubonwayo futhi upholile phezulu ukalwe nemisindo ukuze 16 ngezindlela ezahlukene ukuze uwine. Ngakho ukupakisha isikhwama sakho futhi ibhodi ukuthi Pirates umkhumbi ukuqala adventure yakho kwenye engcono Ibhonasi Slots Online.
Joyina i-Hunt Ukuze Igugu 7×7 kule eyodwa futhi Ibhonasi kuphela Slots Online
Lokhu slot game has a esibonakalayo elula kakhulu futhi ihluzo zenzelwe silingane isihloko kahle. On the screen, uzobona amatafula amabili setha ngokumelene lolwandle. Ithebula yokuqala 7×7 ithebula kanye namabhokisi ahlukahlukene anomsebenzi kwendandatho letiphatselene nengcikitsi kuhle kwamadayimane, amapharele, hat pirate, skull, ring, umkhumbi ifulege ngisho umkhumbi pirates. Ngakolunye etafuleni, lezi ezinye iminyango esenziwe ngokhuni umbuzo kumaka kubo. Bangu 12 iminyango isiyonke. Umugqa ngamunye phezu 7×7 ibhokisi has kwenani lokuwina ebhalwe. Izinketho like amandla / ukukhubaza imisindo ukuzidlalela zinikezwa ngenjongo lula womdlali. I RTP noma kunomvuzo izinga lokhu ongafinyelela kuze esiphezulu 89.90% okuyinto enkulu uma eqhathaniswa kwamanye Ibhonasi Slots Online.
Ngaphandle kwalokhu, the slot offers some special symbols as well. Ukuphila Elicebile logo ungomunye wabo futhi iyaqhubeka ibizwa ngokuthi uphawu zasendle slot game. Kungaba wande iyiphi win ngokufaka 2x futhi azithathi isikhundla zonke izimpawu ngaphandle chitha iplanethi. Uphawu chitha we slot is embondelene phezu itolitji.
Konke mayelana Ukudlala amageyimu
Gameplay yalesi slot Kulula ngempela. Kukhona izibhebhe zombili, nguye has 49 amabhokisi eyodwa ine 12. Esikhathini sokuqala uzocelwa ukusetha ukubheja yakho ngokuchofoza + futhi – option. Ngemva kwalokhu, kufanele ukhethe 7 out of the 12 amabhokisi. ibhokisi ngalinye kuzoveza uphawu. Uma uphawu olufana phezu 7×7 igridi, ibhokisi bazobuyekezelwa egqanyisiwe futhi uphawu uzobe sawela off ohlwini. Ukuze wenze kokuwina, udinga ukuwela off bonke izimpawu kunoma ovundlile, mpo noma umugqa idayagonali. Lokhu kusho ukuthi wonke 7 izimpawu ku umugqa kufanele egqanyisiwe. Uma ungafuni ukukhetha 7 amabhokisi ngokwakho, ungachofoza inketho Ukudlala futhi ake isofthiwe ikwenzele.
ihluzo obumangalisayo, okujabulisayo nemisindo kanye Gameplay ovusa kuyizinto achaza lokhu slot game ngokufanele. A elikhulu Yokuwina Zingakwazi ukufunda esinye isizathu ukuthi ubeka le phakathi okungcono Ibhonasi Slots Online.